Written By Sayar Aung Ko Lat အဲဒီတစ်နေ့၊ ငါးနာရီခွဲ ကားပြန်အပ်ရပါမယ်။ တက္ကစီ ဆရာ ဂျိုးဟာ ခေတ္တနားမည် ဆိုတဲ့ ကပ်ထူဘုတ်ကို ထောင်လိုက်ပါတယ်။ အဲဒီနေ့ဟာ သော့ကြာနေ့ ဖြစ်ပါတယ်။ အမှတ်...
ဘာသာပြန်သူ -နိုင်းနိုင်းစနေ "မေကြီး... သမီးရဲ့ပစ္စည်းကို မေကြီးဘယ်နားထားလိုက်သလဲ?" ရိုးရိုးရှင်းရှင်းစကားလေး တစ်ခွန်းတည်းပါပဲ.. ဒါပေမယ့် မိခင်အပေါ် မှီခိုခြင်းတွေပါနေခဲ့တယ်။ ကျွန်မတို့ဟာ မိဘတွေရဲ့ ကရုဏာအကြင်နာ၊ ဂရုစိုက်ပျိုးထောင်မှုအောက်ကနေ တဖြေးဖြေးကြီးပြင်းလာခဲ့ကြတယ်။ "သမီး အရွယ်ရောက်နေပြီနော်.. ကိုယ့်ပစ္စည်းကိုယ်သေချာမသိမ်းဘဲ အမေ့ကို လာမေးနေသေးတယ်"...
Written By Ko Aung Min Thein (၁) သူမ.. အပြင်မှာ နောက်ယောက်ျားလေးအသစ်တစ်ယောက် တွေ့နေတာကြောင့် အိမ်ကယောကျာ်းနဲ့ တစ်ကုတင်တည်းမအိပ်ချင်တော့ဘူး။ ဘီဒိုထဲက စောင်နဲ့ ခေါင်းအုံးအသစ်ထပ်ထုတ်ပြီး ယောကျာ်းနဲ့ကုတင်ခွဲအိပ်တယ်။ တစ်ယောက်တည်း ကုတင်အထက်မှာ ချမ်းလွန်းလို့...